२०२० मा Technology टेक्नोलोजी ट्रेंडहरू प्रत्येक मार्केटरलाई यसको बारेमा जान्नुपर्दछ Martech Zone
२०२० मा Technology टेक्नोलोजी ट्रेन्डहरू प्रत्येक मार्केटरको बारेमा जान्नुपर्दछ
बिहीबार, मे 7, 2020 बुधवार, मई 6, 2020 क्रिस्टिना लियोन
यो कुनै गोप्य कुरा छैन कि टेक्नोलोजीमा परिवर्तन र नवीनताहरूको साथ मार्केटिंग प्रवृत्तिहरू देखा पर्दछ। यदि तपाइँ तपाइँको ब्यापार अलग देखाउन चाहानुहुन्छ, नयाँ ग्राहकहरु ल्याउनुहोस् र दृश्यता अनलाइन बढाउनुहोस्, तपाई प्राविधिक परिवर्तनहरु बारे सक्रिय हुनुपर्छ।
प्राविधिक प्रवृत्तिलाई दुई तरिकाहरूका बारे सोच्नुहोस् (र तपाईंको मानसिकताले तपाईंको एनालिटिक्समा सफल अभियानहरू र क्रिकेटहरू बीच भिन्नता ल्याउनेछ):
या त प्रचलनहरू जान्नको लागि कदमहरू चाल्नुहोस् र तिनीहरूलाई लागू गर्नुहोस्, वा पछाडि छोडिनुहोस्।
यस लेखमा, तपाई २०२० को लागि क्षितिजमा छ नवीन नवीन प्रविधि प्रवृत्तिहरूको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ। प्रक्षेपण गर्न तयार हुनुहुन्छ? यहाँ रणनीति र उपकरणहरू छन् जुन तपाईले यस बर्ष मैदानमा हिर्काउनु पर्छ।
प्रचलन १: ओम्निचेनेल मार्केटिंग अब वैकल्पिक छैन, यो आवश्यक छ
अहिले सम्म, बजारहरूले केही सामाजिक च्यानलहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर पोस्ट गर्न र संलग्न गर्न सफलता प्राप्त गरेको छ। दुर्भाग्यवस, यो अब २०२० मा भएको छैन। व्यापार मार्केटरको रूपमा तपाईसँग प्रत्येक प्लेटफर्ममा सामग्री पोष्ट गर्न समय छैन। प्रत्येक च्यानलको लागि अनुकूल सामग्री बनाउनको सट्टा, तपाईं सक्नुहुन्छ सामग्री पुन: निर्माण गर्नुहोस् र प्रत्येक च्यानलमा पोस्ट गर्नुहोस्। यसले केवल तपाईंको ब्रान्ड सन्देश सुदृढीकरण गर्दैन, तर यसले तपाईंको व्यवसायलाई सान्दर्भिक र तपाईंको अनलाइन समुदायमा व्यस्त राख्दछ।
ओम्निचेनेल मार्केटिंगले तपाईंको सामूहिक दर्शकहरूलाई तपाईंको च्यानलहरू सिमलेस भ्रमण गर्न सक्षम गर्दछ। परिणाम?
क्रस-च्यानल बिक्री लगभग २ ट्रिलियनको मूल्य हो।
कार्यमा omnichannel मार्केटिंग हेर्न तयार हुनुहुन्छ? कसरी प्रमुख अमेरिकी विक्रेतामा हेर्नुहोस्, Nordstrom, क्रस-च्यानल मार्केटिंग लागू गर्दछ:
नर्डस्ट्रम Pinterest, इन्स्टाग्राम, र फेसबुक खाताहरू सबै क्लिक योग्य उत्पादन पोस्ट र शैली प्रेरणा समावेश गर्दछ।
जब व्यक्ति नर्डस्ट्रमको कुनै पनि सोशल मिडिया खाताहरू ब्राउज गर्छन्, उनीहरू पोष्टहरू किन्न सक्छन् जुन उनीहरूलाई नॉर्डस्ट्रम वेबसाइटमा लैजान्छन्।
एक पटक साइटमा आईपुग्दा, तिनीहरू एक स्टाइलिंग अपोइन्टमेन्ट निर्धारित गर्न सक्दछन्, नोर्डस्ट्रम अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्दछन्, र वफादारी पुरस्कार कार्यक्रममा पहुँच प्राप्त गर्न सक्दछन्।
ओम्निचेनेल मार्केटिंगले ग्राहकलाई सामग्री, ग्राहक सेवा, बिक्री, र इनामको फ्लुइड चक्रमा राख्दछ।
सन्देश ठूलो र स्पष्ट छ:
२०२० मा, तपाईंले ओम्निकनेल मार्केटिंगमा ध्यान दिन आवश्यक छ। डिजिटल मार्केटिंग र सोशल मिडियाको उदयले स्वचालित प्रकाशन उपकरणहरूको आवश्यकता सिर्जना गरेको छ। स्पष्ट रूपमा, व्यवसाय मालिकहरू र मार्केटरहरूसँग प्राय: बहु दिन प्लेटफर्ममा प्रत्येक दिन पोष्ट गर्न समय हुँदैन।
प्रविष्ट गर्नुहोस्: सामग्री सिर्जना, पुनःआकार र प्रकाशन उपकरणहरू बाट पोस्टरमाई वाल। केवल सामग्री मात्र सिर्जना गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईं यसमा विभिन्न आयामहरू पुनःआकार गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै इन्स्टाग्राम पोष्टहरू वा फेसबुक एकै चोटि साझा गरिएको तस्वीरहरू। बोनस? यो सित्तैमा हो। तर यो सामग्री मात्र सिर्जना गर्न पर्याप्त छैन, तपाईं यसलाई प्रकाशित गर्न पनि चाहानुहुन्छ।
समय बचत गर्नका लागि ब्याच गर्नुहोस्, तपाईंको सामग्री निर्माण र प्रकाशन कार्यहरू सँगै। एकै बैठकमा, तपाइँ आकर्षक भिजुअल सामग्री सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र प्रत्येक च्यानलमा स्वत: -प्रकाशित गर्न यसलाई तालिकाबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। गो मा डिजाइनहरू रिसाइज गरेर र साधारण माउस क्लिकको साथ स्वत: प्रकाशन सामग्री, तपाइँ समय, पैसा बचत गर्नुहुन्छ र तपाइँको ब्रान्डलाई सान्दर्भिक राख्नुहुन्छ।
ओम्निचेनेल मार्केटिंग सर्वव्यापी अनलाइन बराबर हुन्छ, र यो २०२० टेक परिवर्तन हो जुन तपाईं बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न।
एउटा डिजाइन सिर्जना गर्नुहोस्
प्रवृत्ति २: भिडियो मार्केटिंगको भविष्य
भिडियो मार्केटिंग हालसालै एक बजवर्ड हो, तर के यो सबै हाइपको लागि मूल्यवान छ? विचार गर्दै कि आधा भन्दा बढि व्यक्तिहरू हरेक दिन अनलाइन भिडियो हेर्छन्, बाट भिडियो मार्केटिंग तथ्या .्कहरू अनुसार HubSpot, मँ भन्छु कि यो एक शानदार छ हो। व्यक्ति कस्तो प्रकारको सामग्री हेरिरहेका छन्? यूट्यूब अब उप्रान्त फेसबुक भिडियो विज्ञापन, इन्स्टाग्राम कथाहरू र लाइभ लोकप्रियताको रूपमा लोकप्रिय हुँदैन।
यो प्रभावकारी भिडियो मार्केटि toको लागि महत्वपूर्ण निजीकरण हो। व्यक्ति अब अत्यधिक पॉलिश, क्युरेट गरिएका भिडियोहरू हेर्नमा रुचि राख्दैनन्। यसको सट्टा, तिनीहरू भिडियो सामग्री चाहन्छन् जुन उनीहरूको व्यक्तिगत रुचि संग प्रतिध्वनि गर्दछ। बाइट साइज भिडियोहरू तपाईको दर्शकहरु संग जोड्न र आफ्नो ब्रान्डको अधिक घनिष्ठ पक्ष साझेदारी गर्न उत्तम तरिका हो।
र चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईंलाई संलग्न भिडियो सामग्री सिर्जना गर्न पेशेवर भिडियोोग्राफरको आवश्यकता पर्दैन। तपाईं सजिलैसँग प्रासंगिक र आकर्षक भिडियोहरू स्क्र्याचबाट, वा बाट शिल्प गर्न सक्नुहुन्छ पोस्टरमाई वालमा भिडियो टेम्प्लेटहरू। तपाईंको ब्रान्ड सन्देशलाई अनुकूल बनाउन भिडियोहरू सिर्जना गर्नुहोस्, उत्पादन सुरूवात बढाउनुहोस् वा तपाईंको श्रोतालाई कम्पनी समाचारको बारेमा जानकारी दिनुहोस्।
यहाँ कति पोष्टिमरवाइवल छ सजीलो छ:
तपाइँको ब्रान्डको टोन र सन्देशसँग मिल्ने फेला पार्न भिडियो टेम्प्लेटहरू ब्राउज गर्नुहोस्
टेम्पलेट अनुकूलित गर्न डिजाइन मा क्लिक गर्नुहोस्
सजिलै प्रतिलिपि, रंग, फन्ट र डिजाइन अनुकूलित गर्न सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्
भिडियोलाई तपाईंको सामाजिक च्यानलहरूमा सिधा पोस्टरमाईवालबाट साझा गर्नुहोस्
केवल चार सजिलो चरणहरूमा, तपाइँसँग साझेदारी गर्न एक ब्रान्ड गरिएको भिडियो छ! छोटो, आकर्षक भिडियो सामग्रीको साथ, तपाईं आफ्नो श्रोताको ध्यानको अगाडि आफूलाई राख्नुहुन्छ, र त्यो उत्कृष्ट ठाउँ हुन जान्छ।
एक भिडियो सिर्जना गर्नुहोस्
प्रचलन: गुगल मार्केटप्लेसमा उत्पादनहरू उपलब्ध बनाउनुहोस्
नयाँ टेक परिवर्तन बजारका लागि धेरै छलफलको विषय भएको छ: गुगल मार्केटप्लेसमा उत्पादनहरू धक्का। विपक्षीहरूले तर्क गर्छन् कि उनीहरूले आफ्नो व्यवसायको ब्रान्डि and र पहिचान प्रतिबिम्बित गर्ने एक आकर्षक वेबसाइटको निर्माणमा ठूलो रकम लगानी गरेका छन्। Google लाई उत्पादनहरु लाई पुशिंग गर्दा आगन्तुकहरु लाई राम्रो तरीकाले प्याकेज गरिएको साइटमा चकित हुने अवसर हटाउँदछ। परिणाम? वेब यातायात मा एक महत्वपूर्ण ड्रप।
तपाईले यो मेट्रिक पछाडि हेर्नुपर्नेछ यहाँ ठूलो चित्र हेर्नका लागि। के तपाई बिक्री गर्न चाहानुहुन्छ? वा के तपाई उच्च भ्रमण गरिएको वेबसाइट प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ? अवश्य पनि, तपाइँ बिक्रीहरू चाहानुहुन्छ, तर तपाइँ एक एक बिक्री चाहनुहुन्न, तपाइँ दोहोर्याउन चाहानुहुन्छ, वफादार ग्राहकहरू, किन यो तपाइँले भव्य वेबसाइट सिर्जना गर्नुभयो, हैन? सहि।
गुगल मार्केटप्लेसलाई तपाईंको वेबसाईटको मृत्युको रूपमा सम्बन्धी साटोमा, तपाईंको ब्रान्डमा सचेतना ल्याउन यसलाई अर्को च्यानलको रूपमा सोच्नुहोस्। जबकि अन्य ब्रान्डले गुगलमा उत्पादनहरू धकेल्ने र ट्राफिक गुमाउने प्रकोपमा खाली छ, तपाईं भित्र हाम फाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको उत्पादनहरू सूचिबद्ध गर्न, बिक्री लिन, र तपाईंको ब्रान्ड बढाउन सक्नुहुनेछ।
तथ्य छ कि तपाईं आफ्नो उत्पादनहरू Google मार्फत मात्र मिनेटमा बेच्न सूचीकृत गर्न सक्नुहुनेछ यसले सजिलो (र नि: शुल्क!) मार्केटिंग उपकरण बनाउँदछ जुन तपाईं बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न।
यहाँ तपाईं कसरी यो गर्न सक्नुहुन्छ:
पहिले, तपाइँको टाउको गुगल मेरो व्यवसाय खाताजहाँ तपाईं आफ्नो उत्पादनहरू, उत्पादन विवरणहरू, छविहरू थप्न र केही मिनेटमा बिक्री सुरू गर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि, तपाइँ तपाइँको ब्रान्ड भ्वाइस, मेसेजिंग र ब्रान्डि your तपाइँको वेबसाइट र सोशल मिडिया च्यानलहरूबाट सुदृढीकरण गर्न चाहानुहुन्छ। अर्थ, तपाईं गन्दा उत्पाद सूचीकरणको होज फज फाल्न चाहनुहुन्न। गुगल बजारलाई त्यस्तै व्यवहार गर्नुहोस् जसरी तपाईं आफ्नो अनलाइन स्टोर गर्नुहुनेछ र छविहरू, प्रतिलिपि र उत्पादन विवरणहरूमा सोच्नुहोस्।
प्रचलन:: SERPS फेवर स्कीमा मार्कअप र रिच स्निपेट्स
डिजिटल मार्केटिंग निर्विवाद रूपमा एसईओ (सर्च इञ्जिन अप्टिमाइजेसन) मा निर्भर छ। २०२० मा, तपाईले लक्षित कुञ्जी शब्द छान्ने र वेब ट्राफिक ल्याउन छवि Alt टेक्स्ट प्रयोग गर्नु भन्दा अधिक गर्नु पर्छ। हो, तपाईंले अझै एसईओ उत्तम अभ्यासहरू प्रयोग गर्न आवश्यक छ, तर तपाईंले अब यसलाई एक कदम अगाडि लिनुपर्नेछ र स्किमा मार्कअपहरूको साथ रिच स्निपेटहरू सिर्जना गर्नुपर्नेछ।
एक धनी स्निपेटमा माइक्रोडाटा हुन्छ, स्किमा मार्कअप भनिन्छ, जसले स्पष्ट ईन्जिनलाई प्रत्येक वेब पृष्ठको बारेमा के हुन्छ भनेर बताउँछ। उदाहरण को लागी, जब तपाई गुगलको खोजी पट्टी मा "कफी निर्माता" मा प्रवेश गर्नुहुन्छ, यी परिणामहरु मध्ये कुन मानिस तपाईलाई क्लिक गर्न अधिक सम्भावना छ भन्ने लाग्छ:
एक स्पष्ट उत्पाद विवरण, मूल्य, ग्राहक रेटिंग, र समीक्षा
अस्पष्ट मेटा विवरण पृष्ठबाट अनियमित तानियो, कुनै मूल्या rating्कन छैन, मूल्य छैन, कुनै जानकारी छैन
यदि तपाईंले पहिलो विकल्प अनुमान गर्नुभयो भने, तपाईं सहि हुनुहुन्छ। २०२० मा, गुगल र याहू लगायत सबै प्रमुख खोजी ईन्जिनहरूले स्कीमा मार्कअपहरू र रिच स्निपेटहरू पहिचान गर्दछ जब SERPs (सर्च इञ्जिन नतीजा पृष्ठहरू) लाई तान्दै।
तिमी के गर्न सक्छाै? तपाईंसँग दुई विकल्पहरू छन्: प्रयोग गर्नुहोस् Schema.org बनाउन अमीर स्निपेटहरू, वा लाभ लिनुहोस् गुगलबाट यो नि: शुल्क उपकरण। अब, तपाईंको प्रत्येक उत्पाद पृष्ठ प्रासंगिक जानकारीले भरिएको छ, जसले तपाईंको व्यवसायको दृश्यता बढाउँदछ।
प्रचलन:: एआईले हाइपर-पर्सनलाइजेसनको सुविधा पुर्‍याउँछ
अक्सीमोरोन जस्तै लाग्छ? एक तरिकामा, यो हो, तर त्यसले यसको सान्दर्भिकतालाई घटाउँदैन। जब हामी मार्केटिंग स्पेसमा निजीकरणको बारेमा छलफल गर्छौं, हामी ग्राहकलाई अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान गर्ने तरिकाहरू जाँच गर्दैछौं।
मलाई स्पष्ट हुन दिनुहोस्: एआई सही रूपमा प्रयोग गरेको बेला ब्रान्डलाई डिमान्माइज गर्दैन। यसको सट्टा, यसले अधिक व्यक्तिगत र सकारात्मक ग्राहक सेवा अनुभव सिर्जना गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। सबै भन्दा पछि, उपभोक्ताहरू अभिव्यक्तिगत मिडियाबाट थाकेका छन्। जब तपाईं सर्वव्यापी मिडिया तिनीहरूलाई inundates तथ्यलाई विचार गर्दा एक दिन 5,000००० विज्ञापन, यो किन उनीहरू थकित छन् हेर्न सजीलो छ। आवाजमा थप्नुको सट्टा, तपाई कलात्मक रूपमा एआई लाई अधिक निजीकृत अनुभव क्युरेट गर्न सक्नुहुन्छ।
टेक्नोलोजीमा परिवर्तन र एआई सफ्टवेयरको आगमनको साथ, बजारहरूले उनीहरूको ग्राहकहरूलाई अधिक नजिकको स्तरमा पहुँच गर्न सक्दछन्। तपाईले व्यक्तिगत प्रयोग गर्नको लागि एआई प्रयोग गर्न सक्नुहुने उत्तम विधिहरू मध्ये एक भनेको उनीहरूले कस्तो सामग्री मन पराउँछन् भन्ने बारेमा डेटा संकलन गर्नु हो।
ध्यानपूर्वक तपाइँको वेबसाइट एनालिटिक्स र सामाजिक मिडिया अन्तर्दृष्टि जाँच गर्नुहोस्। कुन ढाँचा देखा पर्दछ? तपाईंले ब्रान्डि and र इमेजरी सिर्जना गर्न ग्राहक व्यक्तित्व स्थापना गर्नुभयो जुन तिनीहरूसँग बोल्दछ। अझै, यो पर्याप्त छैन यदि तपाईं वास्तविक ब्रान्ड-देखि ग्राहक कनेक्शन चाहनुहुन्छ भने।
त्यसैले किन प्रमुख ब्रान्डहरू एआई प्रयोग गर्दैछ किनभने यसको साथ ...
नेटफ्लिक्सले भविष्यवाणी गर्न सक्दछ कि प्रत्येक प्रयोगकर्ताले आफ्नो ईतिहासको आधारमा के हेर्न चाहन्छ।
आर्मर टेलरहरू अन्तर्गत प्रयोगकर्ताहरूले खाने, निद्रा र स्वास्थ्य बानीमा आधारित स्वास्थ्य विधि।
च्याटबट्सले तपाईंको ब्रान्डको फेसबुक पृष्ठमा आगन्तुकहरूलाई सोध्न सक्छन् यदि तिनीहरूलाई एक विशेष उत्पादन वा सेवा फेला पार्न मद्दत चाहिन्छ भने।
तल लाइन: २०२० मा तपाईका ग्राहकहरूसँग हाइपर-पर्सनल हुनको लागि तपाईलाई एआईबाट अलि मद्दत चाहिन्छ।
प्रवृत्ति:: आवाज खोजी दृश्य सामग्री प्रतिस्थापित गर्दैन
आवाज खोजीमा बृद्धिसँग मार्केटर्सले जन-रूपान्तरणयोग्य पठनीय सामग्री खोजी भैरहेको खोजी ईन्जिनका लागि गर्दछ। भ्वाइस खोजी सबैको रडारमा एक प्रवृत्ति हो, र यथार्थ कुरा:
आधा खोजीहरू २०२० मा भ्वाइस खोजी द्वारा गरिन्छ।
यो भ्वाइस खोजीमा तपाईंको ध्यान केन्द्रित गर्न सायद एक राम्रो विचार हो, तर त्यसो गर्दा, दृश्य सामग्री दिनको रोटी हो भनेर सोच्न गल्ती नगर्नुहोस्। वास्तवमा यो एकदम विपरित हो। प्रमाण चाहिन्छ? यसलाई इन्स्टाग्राम भनिन्छ, र योसँग छ 1 बिलियन मासिक सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू जनवरी २०२० को रूपमा।
व्यक्ति अकल्पनीय दृश्य सामग्री मनपर्दछ। किन गर्दैनन्? भिजुअलका साथ, तिनीहरू:
उनीहरूको चासो अनुरुप सीप वा जानकारी सिक्नुहोस्
नयाँ रेसिपीहरू प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् वा कला र शिल्पहरू सिर्जना गर्नुहोस्
मनोरन्जनात्मक र जानकारीपूर्ण भिडियोहरू हेर्नुहोस्
नयाँ ब्रान्ड र उत्पादनहरू खोज्नुहोस्
जबकि २०२० मा भिजुअल मार्केटिंगको महत्त्व परिवर्तन हुन सकेको छैन, नवीन अवधारणाहरूको आगमनले मार्केटर्सलाई भिजुअल सामग्री सिर्जना गर्न टाढा लैजान्छ। यो अनिवार्य रूपमा एक हानिकारक हुनेछ। यसैले तपाईंको सबै आउटरीच रणनीतिहरूमा असाधारण दृश्य सामग्री समावेश गर्न यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ।
तपाइँलाई मद्दत गर्न, पोस्टरमाई वाल छविको साथ पूर्ण भण्डार गरिएको छ पुस्तकालयहरू, भिडियो टेम्प्लेटहरू, र हजारौं पेशेवर डिजाइन टेम्पलेट्स। यस नि: शुल्क डिजाइन सफ्टवेयरको साथ, तपाईं टेम्प्लेटहरू परिवर्तन गरेर पाठ, रंग र इमेजरी तपाईंको ब्रान्डि match मिलाउन अनुकूलित गर्न सक्नुहुनेछ। वा, तपाईं सामाजिक मिडिया पोष्टहरू, ब्लग इमेजरी, अनुकूलित उत्पाद छविहरू र प्रमोशनल एसेटहरू प्रयोग गर्न सजिलोसँग सम्पादन गर्न सफ्टवेयरको साथ चलाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईंको ओमनीकनेल मार्केटिंग नेल गर्न यी दृश्यहरू पुन: निर्माण गर्न नबिर्सनुहोस्। उदाहरण को लागी, तपाई ब्लग पोष्ट हेडर सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई पिनरेस्ट पिन वा इन्स्टाग्राम पोस्ट र भोइलामा पुनःआकार दिन सक्नुहुनेछ, तपाईले बहुविध च्यानलहरूका लागि आश्चर्यजनक दृश्य सामग्री पाउनुभयो!
टेक परिवर्तनहरू तपाइँको लागि काम गर्नुहोस्
२०२० मा, तपाईलाई ग्राहकहरू ल्याउन, ब्रान्ड सचेतना निर्माण गर्न र तपाईंको व्यवसाय बढाउन एक विशाल नेट कास्ट गर्न आवश्यक छ। त्यसो गर्न, लचिलो र प्रचलनहरूको अगाडि रहन आवश्यक छ। सामग्री मार्केटिंगको कुञ्जी अनुकूलता हो, किनकि मार्केटर्सले उनीहरूको बिना बजार विकसित हुने जोखिमलाई परिवर्तन गर्न प्रतिरोधी गर्दछ। अधिक खुला र कार्यक्षम तपाईं टेक परिवर्तनहरू हुन्, राम्रो तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र जब तपाईं गर्नुहुन्छ? ठिक छ, त्यहाँ तपाईंलाई रोकिरहेको छैन!
टैग: बजार प्रवृत्तिomnichannelप्रविधि प्रवृत्तिरुझान
क्रिस्टिना लियोन एक लेखक, ब्लगर र सनी SoCal बाट संगीतकार हुन्। उनी अनलाइन व्यवसायलाई आकर्षक मार्केटिंग प्रतिलिपिको साथ बढाउन मद्दतको लागि आगोमा छिन्। जब उनी आफ्नो डेस्कबाट टाढा जान्छन्, क्रिस्टिना फिक्शन पढ्न मन पराउँछिन्, समुद्री किनारमा टहलिरहेका र संगीत बजाउँछिन्।
Short.io: एक व्हाइट लेबल यूआरएल शॉर्टनर